Ballet, sei kupfeka yunifomu yemhemberero? - Nhau - Fitdance ballet tutu fekitori.
Imba > Nhau > Indasitiri nhau > Ballet, sei kupfeka yunifomu yemhemberero?
Ballet, sei kupfeka yunifomu yemhemberero?
Ini ndinofunga vasikana vanoda runako vanofanirwa kunge vakafungidzira kuti rimwe zuva vanogona kupfuudza chena vanozvitutumadza tutu, whitesatin bhutsu dzekutamba, vakasunga iwo akakwira mabhora musoro, anotaridzika zvakanyanya akanaka uye akanaka! Kumira pachikuva kwakafanana neSprite pachigunwe, ramba uchitenderera vatambi vejobballet regai moyo wangu ushuvire! Naizvozvo, vasikana vazhinji vanosarudza kupinda munzira ye ballet kutamba! Saka kusarudza sutu inokodzera iwe mubatsiri akanaka kufambira mberi kwako. Kunyangwe iwe uchifarira kuvandudza hunhu hwako kana kutarisa pamhando dze ballet senzira yekugara wakadzikama, iko kushoma kwekuzviremekedza iwe pachako, vadzidzisi vako uye vaunodzidza navo kuti vapinde mukirasi vakapfeka nguo dzinodzidziswa.
Nei uchifanira kupfeka mbatya dzekudzidziraï¼Ÿ
Ballet ndiyo hunyanzvi hwekuratidzira zvizere runako rwemitsara yemuviri wemunhu. Kupfeka onesie inokodzera, mudzidzisi anogona kuona zvakajeka kana kufamba kwako kuripo uye kushandisa kwetsandanyama kwakarurama.
Chekutanga pane zvese, kubva pakachengeteka maonero, ballet kirasi inofanirwa kupfeka nyanzvi muviri sutu, kwete iyo yoga sutu kana regularexercise sutu.Izvo zvinodikanwa zvakanyanya zvehunyanzvi hweballet kudzidzisa mbatya dzakasimba, yakachena donje, kutapira kwe sweat, trainingsocks zvakare iri rakanakisa mwenje dhipatimendi.Sei uchibvunza? Kubva pakuona kwemamiriro ekunze, kuvaka ballet kusimba ndiko kusimba kwekusimba hakugone kufananidzwa, kuvhurika, kusvetuka, ballet yakatwasuka zvinhu zvitatu, saka iko kuita kwe ballet kunofanirwa kumisikidza mitsara yemuviri wese, kuti mhasuru fiber irambe yakatambanudzwa.
Anotanga ballerinas, kunyanya kana vechidiki vari vakuru, vachatambura nekukora pane kutambanudza tsandanyama dzemhasuru kana vasingaite tsika dzakajairika uye vachishandisa mhasuru zvisizvo. Zvimwe zvakakomba, ivo vachakonzera kukuvara kwepanyama.Yevashandi vemuviri mapfekero ebarlet anodzidziswa asingakwanise vadzidzisi kuti vaone zvakajeka mitsara nemhasuru dzemuviri, uye nekuzvitungamira nekuzvigadzirisa munguva. Yakasununguka yoga uye mbatya dzemitambo, inongoviga zvikanganiso zvavo chete, mudzidzisi haakwanise kuwana yako mhasuru kufamba kweasina- yakajairwa poindi, haigone panguva yakakodzera, kwenguva refu-isiri-yakajairwa maitiro mhedzisiro yakakomba.
Pano tinotora muenzaniso, "Shanu" chiitiko chekutanga mubharlet. Kufamba kwayo kwakajairika kutenderedza zvigunwe nemabvi kumativi emuviri. Pazasi petsoka mbiri dzakabatanidzwa zvakaenzana pasi kunze kwekunze kwecheka. Vamwe vanotanga vane tsoka dzakatenderedza mativi asi mabvi achiri kumberi uye makumbo akamonyororwa nekusvinwa pamwechete. Kana iwe wakapfeka masutu akasununguka, mudzidzisi haacherechedze. vako vanokoshesa nguva. Mukufamba kwenguva, makumbo haangogone kuve akaremara uye akafuta, asi zvakare anotungamira kukuvara kwetsoka nemabvi.Kutaura izvi, unogona kuona kuti sei tichigara tichisimbisa kukosha kwekupfeka nyanzvi sutu yemuviri forballet kudzidziswa.
Kechipiri, kubva pakuona kwekuona, vadzidzi vanofanirwawo kupfeka mbatya dzehunyanzvi dzekudzidzira muviri kuUnited States vanouya kukirasi! Ballet koshitomu uye ballet mashandiro ndeaya anoonekwa hunyanzvi, ballet koshitomu chikamu chakakosha che ballet art, inotamba yakanyanya kukosha basa mune ballet kuita, iyo ballet munzvimbo dzakasiyana siyana inofanirwa kuvimba ne ballet costume foil, kuti uwane yakasarudzika artisticvisual mhedzisiro. Saka kana iwe ukapfeka sutu yemuviri yakanaka, unogona kukwana zviri nani mumhepo ye ballet. Zvakanaka kuti iwe uve neruzivo rwekuzvibata, kuvandudza kuisa pfungwa dzako, kuvandudza hunhu hwako uye maonero epfungwa, uye unozonzwa semutambi we ballet. Takakuudza kare kuti haufanire kuramba kupfeka sutu yekumbundira nekuda kwekuti iwe hauna chiyero cheagood. Sutu yemuviri ichaita kuti chimiro chemuviri chiunzwe nebhaleti rive rakakurumbira. Mune rimwe shoko, yunifomu ye ballet yakasimba ichaita kuti mukadzi wese awedzere kuvimba uye akanaka!
Paunosarudza sutu ye ballet:
1. Mutsipa wepamberi haufanire kunge wakafutisa, asi kumashure kunofanirwa kunge kwakavhurika zvakakwana kuti ifumure zvizere mabwe edombo.
2. Zviri nani kuva usina maoko uye kugona kuona majoini egokora. Kana maoko aripo, putsa iwo kumusoro kwegokora.
3. Wedzera flounce skirt yekutora makona pazvinenge zvichidiwa.
4. Hembe dzemuviri dzinowanzo gadzirwa neshinda, uye vana vanogona kudzipfeka kana vakakura zvishoma. Asi kazhinji kunzwa kuri pamapfudzi kana muhudyu ndiko "Wow!", Zvinoreva kuti vana vanokura nekukurumidza, kuti vashandure kuita hombe muviri mbatya! Kune vanhu vakuru, zvinoreva kuti uri kuwedzera uremu zvakare.
Kupfeka sei sutu ye ballet?
(1) Kutanga kupfeka leggings, padhuze-kukodzera uye inogona kuve isina kukwana pasuru mbichana!
(2) Wobva wapfeka masokisi, maoko zvishoma zvekukwira kumusoro, usamanikidze kudhonza o!
(3) Inotevera ndeimwe-sutu sutu, mushure mekupfeka iyo needto yekutarisa pamberi pegirazi, kuti uone kana paine chero kuunyana kana kuomarara
Ps: Usamhanye kana wakapfeka sutu-imwechete.Kana iwe ukabata mutsipa, dhonza. Mafudzi nemaoko ekumusoro ari padyo nepedyo.
(1) Na 30â „ƒpazasi pemvura inodziya, donhedza yakaenzana chiyero chekusarerekera sipo, fambisa zvakanaka uye sanganisa
(2) yemukati nekunze kweyeyeie nguo inopinduka, yakanyoroveswa zvizere, ne
(3) nzira yekutsikirira! Mumvura yakachena inodziya pazasi pe30â „ƒ, dzokorora danho re, bvisa furo
(4) Chengetedza mukati nekunze kutendeuka mamiriro, mumumvuri wemhepo chaiyo yakasvava!
Yapfuura:Chii chinonzi tutu ballet dress?
Tevere:Sei vatambi ve ballet vachimira padenga?